Kuboshwe amaphoyisa (11) kwelokubulala umshayeli oLundi
Simphiwe Ngubane | February 19, 2021
AZINIKELE kwabomthetho, aboshwa amaphoyisa angu-11 asolwa ngokushaya nokubulala owesilisa owayengumshayeli wetekisi, ayemfuna isibhamu kwa-C oLundi ngo-Okthoba 7 nyakenye.
La maphoyisa avele enkantolo yesiFunda eMahlabathini ngoLwesithathu, akhululwa ngebheyili kaR3 000 umuntu emunye.
UMNUZ Lindani “Mandondo” Dludla okuthiwa wangenelwa amaphoyisa elele amfuna isibhamu, kuthiwa amshaya kanzima washonela esibhedlela Isithombe: SITHUNYELWE
Icala lawo lokubulala, ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho nokushaya lihlehliselwe uMashi 23 nonyaka. Incwadi egunyaza ukuboshwa kwala maphoyisa ikhishwe yile nkantolo ngoFebhuwari 10.
Asolwa ngokushaya kanzima uMnuz Lindani “Mandondo” Dludla (31) owashonela esibhedlela eNkonjeni. Uphiko oluphenya ngezenzo zamaphoyisa, i-Independent Investigative Directorate Directorate (IPID), ihlele ukuboshwa kwala maphoyisa kanti asebenzela ezindaweni ezahlukene.
Kwababoshiwe kubalwa (sishoda ngamaranks amaphoyisa) uMziwakhe Nsibande (49), uKhulekani Gina (50), Mpiloyakhe Magwaza (39), Lizwi Mvundla (37) Thabani Ndlovu (45), Shengelezi Buthelezi (53), Sibusiso Mhlongo (39), Njabulo Wela (37), Selby Zulu (39) no-Ayanda Msomi.
Kukhona asebenzela esiteshini saseMahlabathini, kwezobunhloli oLundi, uphiko iK9 eVryheid, esiteshini eMagudu oPhongolo nayisihlanu asuka esiteshini saseNanda ophikweni iTactical Response Team (TRT).
Azehlanga kahle kwaDludla izindaba zokukhululwa kwamaphoyisa ngebheyili. Bebefuna agqunywe esitokisini, bese egixabezwa ngezigwebo ezinzima uma sekuphela ukuqulwa kwecala.
Ubaba kaDludla, ocele lingadalulwa igama lakhe ephepheni, uthe abaziswanga ngokuvela kwamaphoyisa enkantolo. Uthe ufonelwe abafana bendawo bemazisa ngakho abaze bamlanda emsebenzini ngemoto bamyisa enkantolo.
“Kukhona ukwenzelela okukhona, bayachanasa abavalelwanga nasesitokisini ekubeni beyingozi emphakathini. Ingane yami yayishaywa iboshwe izandla ingakwazi ukuzivikela, imbozwe ngoplastiki ikhanda ishokhwa ngogesi yophela ngaphakathi. Yayiphalaza igazi, ngayiyisa esibhedlela lapho yashonela khona,” kusho ubaba kamufi ngosizi.
Kwasusa izibhelu emphakathini ukusocongwa kukaDludla, kwavalwa thaqa imigwaqo engena nephuma edolobheni oLundi ngamathayi avutha, nodoti namatshe abantu befuna kuboshwe amaphoyisa athintekayo.
Umbiko kadokotela woMbuso wokuhlolwa kwesidumbu wathi uDludla wazishonela ngokwakhe. Lokhu kwagovuza umphakathi kwaphoqa ukuthi sihlolwe kabusha ngudokotela ozimele isidumbu, nokuyilapho kwavela ukuthi ubulawe ngokushaywa encishwe umoya.
Umufi washiya emhlabeni abantwana abathathu, umkhulu wabo athe badonsa kanzima.